आफ्नै मात्रै पेवा ठान्ने खुनी मानवतालाई के को हक छ हौ पृथ्वी दिवस मनाउने ! | Ratopati
personविकास बस्नेत exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ११, २०७७ chat_bubble_outline0
लगभग एक लाख वर्ष अगाडि अफ्रिकामा आफ्नो शैशवकालको कोक्रो छाडेर बाहिर बामे सर्दा मानवता कति अबोध देखिँदो हो !
हिँड्दै र दुनियाँमा फैलदै जाँदा बाटोमा उसले औजार बनायो ! आधाभूत आवश्यकता अनेक चिजबिज पोल्टामा हाल्यो - पोषिलो चामल, दाल, फलफुल, तरकारी , अन्नपात, माछा, मासु, दुधालु गाई, घर कुर्ने कुकुर !
नजाने कति अन्नपात ,प्राणी र जीवलाई तिनको छानेर/ जाँचेर आफ्नो अनुकुल बनाउँदै/हुर्कांउदै यो स्वरुपमा ल्यायो । तिनको आनुबंशिक र शारीरिक संरचनामा उसले नजानेरै 'रिडिजाइन' गर्‍यो । तिनको उदविकासको बाटो नै बदलिदियो । यो उसको आवश्यक र नियोजित कदम थियो । यहाँसम्म मानवताको मुहार निर्दोष नै थियो ।
तर पछिल्लो समय उसले समाज, राज्य, धर्म, प्रविधि र नजाने के के हो के के बनायो !
बिस्तारै यसको अनुहारमा क्रुररता झल्किन थाल्यो ।
त्यस यता पृथ्वीका हर जीवको उदविकासको बाटो नै कुनै एक प्रजातीको कारण प्रभावित भएको छ भने त्यो मान्छे हो । मान्छेको गतिविधि र उसको अनियन्त्रित कदमले नियमित प्राकृतित प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । जल, जमिन, जंगल र बायुमण्डल कतै छैन जहाँ मान्छेले पदचिन्ह छाडेको नहोस् !
यसैको कारण हो - ध्रुवीय भालुले ठिमाहा बच्चा जन्माउन थालेको छ, शहरका मुसा पिज्जा पचाउने भएका छन, काग चाउचाउको मसला स्वाद मान्न थालेका छन, तिब्र शिकारका कारण हात्तीको दाह्रा छोटिन थालेको छ , बाँदरले चिया पिएको देख्न थालिएको छ, शहरमा भंगेरा देखिन छाड्यो, नदी प्रदुषणले गर्दा बिष प्रतिरोधी माछाको उदविकास भएको छ । नरव्हेल र बेलुगा डल्फिन बीच समागत आश्चर्य हुन छाड्यो । रुखमा बस्ने छेपारोले ठूला भवन चढन मिल्ने गरी खुट्टामा अतिरिक्त गम उदविकास गरेका छन् ! यसको फेहरिस्त लामो हुन सक्छ ।
मान्छे फैलनु र अन्य प्रजाति यसरी प्रभावित हुनु संयोग मात्रै हैन ।
हामीले जंगल सखाप पार्‍यौ ! उद्योग, कलकारखाना र सपिङ मलले दुनियाँ ढाक्यौं । हामीले खडा गरेका समग्र कंकृट संरचना पेलेर छर्कने हो भने पुरै धर्तीमा दुई मिलिमिटर बाक्लो तह बन्छ । हामीले नदीको प्राकृतिक वहाव रोकेर त्यहाँ आश्रित जीवन तहसनहस पार्‍यौं । धरतीको गर्तबाट दोहन गरिने खनिज, धातु र उर्जाको कुरै नगरौं । नदी, समुद्र, हावा, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाबाट भन्दा बढी माटो, बालुवा वा ढुङ्गा मान्छेले ओसारपसार गर्छ ।
कालाहारी मरुभूमिमा रुखको जरा ६० मिटर गहिरो पुग्छ, मान्छेले सुन खोज्न मात्रै ५ हजार मिटर गहिरो टनेल खनेको छ ! तेल खोज्न रुसमा १२ हजार मिटर गहिरो यस्तै टनेल खोलिएको छ । जान्नेहरु भन्छन- अबको तीस बर्षमा समुन्द्रमा माछाभन्दा बढी प्लास्टिक हुनेछ ! हामीले छर्केको बिषादीले समुन्द्रका ४ सयभन्दा बढी स्थान जीवविहीन भएका छन् ! पछिल्लो आठ लाख वर्ष यताकै धेरै कार्बन बायुमण्डलमा जमेको हाम्रै कारणले हो । पछिल्लो १०० वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम ०.८ डिग्रीले बढेको छ ।
यस्ता 'फौजदारी' कर्तुतको उल्लेखले ठेली भरिन सक्छ !
यसरी आफ्नै मात्रै पेवा ठान्ने खुनी मानवतालाई के को हक छ हौ पृथ्वी दिवस मनाउने !
Title photo:Green vector created by freepik - www.freepik.com